Frauenberatungs- und Kontaktstelle e.V. waa hay’ada caawinta haweenka looga tali galay haweenka. Xarunteena la talin-ta waxay bixisaa maclumaad ku saabsan nolol malmeed, waxa wada kulmi karro haweenka calaam kasta, wadatashi caam iyo mid shakhsi ah waa laga dhiiba. Haweenka da’kasta, jinsiyad kasta iyo diin kasta way noo imaan karan. Arimahaaga waxa loola dhaqmi doona si qarsoodi ah. Haddi loo baahan yahay waxaan la shaqeeyna gabdho turjubaanad ah.
Waxaa jirro sharaxaadyo noloshaada iyo waxaana ka caawin karna in wax laga qabto baahiyaha kala duwan si. Waxaana shuraako ahaan ula shaqaynaa hay’ado kale sida ku gudbin karno haddi dantaada qasabto.
Adeegeena waa lacag la’aan waana qarsoodi waxaana ku bixinaa bii’ad aamin ah.
Haddi aad jeclaan laheyd in lagaala taliyo Frauenberatungs- und Kontaktstele e.V. , fadlan la soo xiriir 0209/207713 si aad balan u qaadatid. Balan la’aan waxaa imaani karta wakhtigeena hadal u furan. (Kaani wa ciwaanka hay’ada caawinta haweenka: Frauenberatungs- und Kontaktselle e.V.; Robert-Koch-Str. 18; 45879 Gelsenkirchen)